VaBhasikiti Vanoti VaMugabe Mbune Ndivo Vakatuma Mauto kuti Avatsvagire Rutsigiro muna 2008
Vaimbova gurukota rinoona nezvedunhu reMasvingo VaKudakwashe Bhasikiti vanoti mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe mbune ndivo vakatuma mauto kuti aende kumatunhu ose enyika kuno vatsvagira rutsigiro musarudzo dzemuna 2008.
VaBhasikiti, avo vaiva mumiriri weMwenezi East vakadzingwa muZanu-PF gore rapera vachipomerwa mhosva yekutsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joice Mujuru. Amai Mujuru neVaBhasikiti vave nhengo dzebato rinopikisa reZimbabwe People First.
Sarudzo idzi dzakaita mhirizhonga inotyisa uye bato reMDC-T rinoti vatsigiri varo vanopfuura zana nemakumi mashanu vakapondwa, vakawanda vakapisirwa misha, vamwe vachienda muhupoteri.
Sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika idzi hadzina kuzoitwa mushure mekunge VaMorgan Tsvangirai vati nyika yainge yaberekera ingwe.
VaBhasikiti vanoti parizvino havakwanise kubuditsa mazita emauto aya kunyangwe hazvo vainawo.
Nyaya Ina VaKudakwashe Bhasikiti
Asi sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakamboburitsa mazita emauto anonzi ainge aendeswa kumatunhu muna 2008.
Mazita acho ndeanotevera: